Ciyaaraha – Page 33 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Paulo Dybala:- Juventus Waxa ay Leedahay Tayada ay Leeyihiin Real Madrid iyo Barcelona
Xidiga kooxda Juventus Paulo Dybala ayaa aaminsan in juventus ay awood ahaan iyo tayo ahaan ay u wanaagan tahay sida kooxaha Real Madrid iyo Barcelona muhiimadiisana ay tahay in uu Champions kula guuleysto sanaha soo socda. Kooxda Juventus ayaa 5-tii xili ciyaareed aynu soo dhaafnay ku guuleysanaysay Horyaalka dalka Talyaaniga iyadoo kaliyah raadinaysay sanidihii dambe ku guuleysiga koobka caanka ...
Daafac ka Tirsan kooxda Sporting Gijon oo ku Biiray kooxda Leicester City
Naadiga Premier League champions-ka ee Leicester City ayaa xaqiijisay in ay heshiis la gaartay kooxda dalka Spain ka dhisan Sporting Gijon oo ku aadan xidiga daafaca ka ciyaara ee Luis Hernandez heshiis afar sano ayuu qalinka ugu duugay. 27-sano jirkaan ayaa la xaqiijiyay in Garoonka King Power Stadium usoo dhaqaaqi doono Bisha July 1-eeda markuu dhaco heshiiska uu kula jiro ...
War Rasmi ah:-Real Madrid oo Dib Usoo Ceshatay Xidiga Alvaro Morata
Kooxda Real Madrid ayaa dib ula soo wareegtay weeraryahankeeda Alvaro Morata oo labo xili ciyaareed ku qaatay kooxda dalka Talyaaniga ee Juventus. Xidiga heerka caalami ee xulka dalka Spain ayaa loo ogolaaday in uu dib ugu laabto kooxdiisa Hore kadib markii xili ciyaareedkii 2014-kii uu kaga soo dhaqaaqay Garoonka Santiago Bernabeu aduun dhan €32 million War kasoo baxay Naadiga Real ...
Zlatan Ibrahimovic oo Ciyaaraha Caalamiga ka Fariisan Doona
Weeraryahanka xulka dalka Sweden Zlatan Ibrahimovic ayaa cadeeyay in uu ka fariisan doono ciyaarayaha Caalamiga kadib Uero 2016. Xulka dalka Sweden ayaa la dheeli doono xulka dalka Belgium waana kulankii ugu dambeeyay ee xulka dalka Sweden uu matali doono weeraryahanka kooxda PSG Zlatan Ibrahimovic. Isagoo maanta la hadlayay warbaahinta ayuu sheegay Zlatan Ibrahimovic “kani waa kulankayga ugu dambeeyay ee aan ...
Barcelona oo Xiiseenaysa Xidiga kooxda Evertoon Ramiro Funes Mori
Agaasimaha Ciyaaraha kooxda Barcelona Robert Fernandez ayaa xaqiijiyay In Barca ay xiiseenayso daafaca dhexe ee kooxda Evertoon Ramiro Funes Mori.. Kooxda ku guuleysatay Horyaalka dalka Spain ee Barcelona wakiilo ka socda ayaa ku sugan dalka Mareykanka iyagoo daawanaya qaab ciyaareedka daafaca Ramiro Funes Mori oo xulkiisa Argentine kala qeyb galaya ciyaaraha Copa America. “waa cyaaryahan fiican waan ognahay muddo badan ...
Arsene Wenger:- Labo Ciyaartooy kaliyah ayay Arsenal u Baahan Tahay
Macalinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa cadeeyay In ay kooxdiisa u baahan tahay kaliyah labo ciyaartooy oo tayo wanaagsan. Kooxda Gunners ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay ku raadjoogtay weeraryahanka kooxda Leicester City Jamie Vardy’ iyadoo ku baadigoobaysay aduun dhan £20 million sida uu xaqiijiyay Macalinka reer france ee Arsene Wenger. Gunners ayaa xili ciyaareedkaan lasooo wareegtay kaliyah xidiga heerka caalami ee ...
Jamie Vardy oo Lagu Cadaadinaayo Soo joogista Leicester City
Madax ku-xigeenka kooxda Leicester City ayaa kalsooni ku qaba in xidiga Jamie Vardy uu iska diido dalabyada kaga imaanaya kooxda arsenal islamarkaana uu hogaamiyo kooxda xili ciyaareedka dambe. Laacibka heerka caalami ee xulka dalka Dalka England ayaa xili ciyaareedkii soo dhamaaday dhaliyay 24-goal isagoo kooxdiisa u suurta galiyay hanashada koobka Premier League markii ugu horeysay taasi oo keentay in uu ...
Thiago Silva oo Dib ugu Soo Laabtay Xulka Brazil kadib Ceyrintii Macalin Dunga
Daafaca kooxda Paris Saint-Germain Thiago Silva ayaa ku dhow in uu dib ugu laabto xulkiisa Brazil. Kaptanka kooxda dalka Faransiiska ee Paris Saint-Germain Thiago Silva ayaa lagu daray 35-ciyaaryahan ee xulka dalka Brazil u matalaya ciyaaraha Olympics ee ka dhacaya Magaalada Rio Bisha August. 31-jirkaan daafaca ka ciyaara ayaa ganaax kala kulmay Macalinkii laga ceyriyay shaqada ee Dunga kadib markii ...
Alvaro Morata oo Dib ugu Labanaya Kooxda Real Madrid
Weeraryahanka kooxda Juventus Alvaro Morata ayaa la aaminsan in uu doonayo sii joogista Magaalada Madrid sida ay qortay Majalada AS oo Spain kasoo baxda. Laacibka heerka caalami ee xulka dalka Spain ayaa la tilmaamayaa in uu ku dhow yahay in uu heshiis hoose la gaaro naadigiisa Hore ee Real Madrid madaama dhawaan uu ku biiray kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. ...
Candreva:- Ciyaartooda Juventus Waa kuwa ugu Saameynta Badan Xulka Talyaaniga
Laacibka qadka dhexe ee kooxda Lazio Antonio Candreva ayaa amaan usoo jeediyay xidigaha kooxda Juventus isagoo ku tilmaamay kuwa ugu saameynta qaranka talyaaniga ciyaaraha Uero 2016. Xulka Azzurri ayaa guul ku furtay ciyaaraha Uero 2016 kadib markii 2:0 ay kaga guuleysteen xulka dalka Belgium. Antonio Candreva ayaa sheegay in xidigaha Gianluigi Buffon oo goosha qabta iyo xidigaha daafacyada ka ciyaara ...